December 2020 - ApannPyay Media
စိုးရိမ်ရတဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လုံးဝပြန်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက်
February 1, 2021 December 31, 2020 by ApannPyay Media
စိုးရိမ်ရတဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လုံးဝပြန်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက် ကျွန်တော် နှလုံးရောဂါ ပြင်းထန်စွာခံစားရချိန် ကျွန်တော် နေထိုင်ရာပုသိမ်မြို့ ့ရှိပုသိမ် ဆေးရုံကြီး နှဇီဝကအထူးကု ဆေးခန်းတို ့တွင်တက်ရောက်ကုသခဲ့ရာ ဆေးစစ်ချက်အရ နှလုံးသွေးကြော သုံးချောင်းကျဉ်းနေပြီးတစ်ချောင််းမှာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့သော ကြောင့် နှလုံးစက် ထည့်ရမည့်အခြေနေဖြစ်ခဲ့ပါသည်- ထိုအချိန်တွင်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့် လို ခွဲစိပ်ခါနီးလူနာတစ်ဦး မခွဲစိပ်ရပဲသက်သာပျောက်ကင်းသွား သည်ဆိုသော ဆေးနည်းကိုပေးသဖြင့် ရန်ကုန် ၌ဆေးကုသခံရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ခုနှစ်ရက်မျှဆက်တိုက်သောက်ခဲ့ပါသည်- ထို ့နောက်ရန်ကုန်အာရှတော်ဝင် အထူးကု ဆေးခန်း တွင်သွားရောက်စမ်းသပ်ရာနှ လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို ့မှုများမရှိတော့ပဲအကောင်းပကတိဖြစ်နေကြောင်းအံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိရပါသည်- ဆရာမကြီးမှာပုသိမ်မှဆေးစစ်ချက်များကိုကြည့််၍မယုံနိုင်ဖြစ်ကာသေချာစေရန် မဟာမြိင် အထူးကုဆေးခန်း၌24နာရီစက်ဖြင့်ထပ်မံစမ်းသပ်ရာနှလုံးသွေး ကြောများပုံမှန်ကောင်းမွန်နေကြောင်း သေချာသွားတော့သည်- ကျွန်တော်ခံစားနေရသောရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းနှင့်ဘယ်ဘက်လက်မောင်း ကို််က်ခြင်းဝေဒနာများလည်းပျောက်ကင်းသွားပါသည်- ထို ့ကြောင့် ကျွန်တော့် လို နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ဝေဒနာခံစားနေရသူများအတွက်စေတနာရှေ့… Read more
၀ိတ်ချချင်သူများ နှင့် ဆီးချိုရှိသူများ အတွက် အစွမ်းထက်သည့် ငှက်ပျောသီးစိမ်း
December 31, 2020 by ApannPyay Media
၀ိတ်ချချင်သူများ နှင့် ဆီးချိုရှိသူများ အတွက် အစွမ်းထက်သည့် ငှက်ပျောသီးစိမ်း ငှက်ပျောသီးအစိမ်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသလို ကိုလက်စထရောပမာဏကို လည်းထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီးချို သွေးချိုပမာဏကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး တစ်နေ့တာလုံးအတွက် လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးကို များစွာအကျိုးထူးစေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအစိမ်းမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နှလုံးနဲ့ ကြွက်သားရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရိုးနဲ့ သွားတွေကို ခိုင်မာစေတဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓါတ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး သွေးတွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအစိမ်းကို ပြုတ်မယ် ရေ ၊ငှက်ပျောသီးအစိမ်း ၅ လုံး ပြင်ဆင်ခြင်း ငှက်ပျောသီးအစိမ်းကို ရေသေချာဆေးပြီး အတုံးလိုက်လှီးလိုက်ပါ။ မလှီးဘဲ ဒီအတိုင်းပြုတ်ရင်လည်း ရပါတယ်။ အခွံကိုမနွှာဘဲ … Read more
ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုး ရင်ကြပ် ချွဲကျပ်၊ သလိပ်ပျော်၍ အခိုးပွင့်စေတဲ့ ခွေးတောက်ရွက်ဆေးနည်း
ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုး ရင်ကြပ် ချွဲကျပ်၊ သလိပ်ပျော်၍ အခိုးပွင့်စေတဲ့ ခွေးတောက်ရွက်ဆေးနည်း ဆောင်းရာသီမှာ ချောင်းဆိုးရင်ကြပ်၊ ချွဲသလိပ်ခပ်နေရတာ အဖြစ်များကြတာကို အတွေ့များနေရပါတယ်။ အဲ့ဝေဒနာအတွက်” ခွေးတောက်ရွက်ခြောက်”ကသမားကျော်ပါလို့ဆိုရပါမယ်။ သူ့ကိုရေနွေးကြမ်းထဲ လဘက်ခြောက်အစား ခပ်သောက်ရင် ချွဲသလိပ်တွေပျော်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အခိုးပွင့်ပြီး ရေချိုးလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ အရွက်ကို အခြောက်လှမ်းတဲ့ အခါဆားရည် 5မိနစ်စိမ်၊ရေစင်စင်ဆေးပြး ရေအခြောက်ကောင်းနေတစ်ရက်လှမ်းပြီး နောက်ရက်တွေမှာအရိပ် ထဲမှာပဲလှမ်းပေးရပါတယ်။ (၇)ရက်လှမ်းပြီးရင်သုံးလို့ရပါပြီ။ ရေနွေးကြမ်းသောက်သလို မကြာခဏသောက်နေရင်ပိတ်နေတဲ့အခိုးတွေပွင့်ပြီး ချွေးတစိုစိုနဲ့ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါသောက် လဘက်ရည်တစ်ပန်းကန်စာကို နံနက် ၊နေ့လ၊ညနေ၊ညတစ်ကြိမ်စီ သောက်ပေးလိုလည်းရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့နေ့စဉ် သောက်ပါတယ်။ အခုနေ လှမ်းထားတာကဒုတိယအသုပ်လှမ်းတာပါ။ အရင်ရှိပြီးသား ခွေးတောက်ရွက်ခြောက်တွေ ကုန်ခါနီးနေလို့ပါ။ ဓါတ်ဗူးထဲကို ခွေးတောက်ရွက်ခြောက်ငါးရွက်ကို ထည့်ပြီး ငါးမိနစ်လောက်နှပ်ထားပြီးမှသောက်ပါ။ အရောင်ကအဝါဖျော့လေးနဲ့ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့လေးရပေမယ့် အရွက်အစိုလိုအခါးဓါတ်မပြင်းပဲသောက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။။ Credit – Shwe La … Read more
အခုလို ရာသီဥတုမှာ နှာစေးနှာပိတ်တာနဲ့ လည်ပင်းနာတာကို သက်သာစေမယ့် အစွမ်းထက်နည်းလမ်း ဖျားချင်ချင်ဖြစ်ရင် အရင်ဆုံးကြုံတွေ့ရတာက နှာစေး၊ နှာပိတ်တာနဲ့ လည်ပင်းနာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နှာစေး၊ နှာပိတ်တာနဲ့ လည်ပင်းနာ တာတွေက အာဂန္တုပေမယ့် အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းစာဘဲဖြစ်ဖြစ် အာရုံစိုက်ပြီး မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သဘာဝနည်းဖြင့် နှာေ စး၊ နှာပိတ် တာနဲ့ လည်ပင်းနာ တာကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ သံပုရာရည် လက်ဖက်ရည် ဇွန်း ၁ ဇွန်း သစ်ကြမ်းပိုးခေါက် နည်းနည်းဖြူး ကြိတ်ထားတဲ့ ဂျင်း လက်ဖက်ရည် ဇွန်း တစ်ဝက် ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ပန်းသီးရှာလကာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် နနွင်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်းရဲ့ ၄ ပုံ ၁ပုံ … Read more
ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် တီဘီပျောက်သည့် ဆေးနည်း-
ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် တီဘီပျောက်သည့် ဆေးနည်း လက်တွေ့ပျောက်ကင်းလို့စေတနာရှေ့ထားဆေးနည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော့်အမေလက်တွေ့ပါ ….ချောင်းကတဟွတ်ဟွတ်သွေးစတွေကပါသေးတယ်…. မောလိုက်တာကလည်းဖိုထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲအသားရည်ကလည်းညိုညစ်ညစ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့… ကံကောင်းချင်တော့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးနည်း အိမ်မွေးကြက်ဥတလုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည်….ကြက်ဥအခွံတခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့်…. ကြက်သွန်ဖြူ တလုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့် ……ဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်…… အောက်မီးနှင့်ပေါင်းခဏနေကျက်ပြီ တနေ့သုံးကြိမ်စား အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်…..။ Credit:မြန်မာ့ဆေးမီးတို naethitmyanmar ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ ပန္းနာရင္ၾကပ္ တီဘီေပ်ာက္သည့္ ေဆးနည္း လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းလို႕ေစတနာေရွ႕ထားေဆးနည္းေလးေပးလိုက္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္အေမလက္ေတြ႕ပါ ….ေခ်ာင္းကတဟြတ္ဟြတ္ေသြးစေတြကပါေသးတယ္…. ေမာလိုက္တာကလည္းဖိုထိုးေနတဲ႔အတိုင္းပဲအသားရည္ကလည္းညိဳညစ္ညစ္မခံစားနိုင္ဘူးေပါ့… ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ မိတ္ေဆြတေယာက္ရဲ႕ေဆးမီးတိုနဲ႔ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းခဲ႔ပါတယ္။ ေဆးနည္း အိမ္ေမြးၾကက္ဥတလံုးထက္ျခမ္းခြဲ ပန္းကန္တလံုးထဲထည္….ၾကက္ဥအခြံတျခမ္းျဖင့္ႏွမ္းဆီစစ္စစ္ထည့္…. ၾကက္သြန္ျဖဴ တလံုးအခြံႏြာပါးပါးလွီးျဖဴးထည့္ ……ဒန္အိုးထဲေရအနည္းငယ္ထည့္…… ေအာက္မီးနွင့္ေပါင္းခဏေနက်က္ၿပီ တေန႔သံုးၾကိမ္စား အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္…..။ Credit:ျမန္မာ့ေဆးမီးတို naethitmyanmar
၂၃ ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်
၂၃ ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် သိန်း ၁၅၀၀၀ ကဂ ၄၀၆၁၀၄ မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀၀ ဓ ၇၀၈၉၅၉ သိန်း ၅၀၀၀ ကင ၈၇၅၇၀၇ သိန်း ၅၀၀၀ ဏ ၃၂၀၆၁၃ သိန်း ၂၀၀၀ ၅၄၅၉၉၆ သိန်း ၂၀၀၀ ဇ ၆၆၈၉၇၃ သိန်း ၂၀၀၀ တ ၄၃၅၆၄၂ သိန်း ၂၀၀၀ ဍ ၆၀၀၆၉၃ သိန်း ၁၀၀၀ ဌ ၈၃၆၆၄၅ မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀ ဎ ၁၃၀၈၂၈ မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀ တ ၄၈၁၄၃၃ မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀ ည ၉၅၁၆၂၆ မိုးယံ … Read more
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါပျောက်နည်း
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါပျောက်နည်း ကျောက် ကပ် ရောဂါနဲ့ ပါတ်သက်လို့ စိတ်ညစ် နေကြ သလား။ ငွေတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန် စေရဘဲ ပျောက်ကင်း စေရမယ်။ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါ။ ပြောင်းဖူးက ထွက်တဲ့ အမ​ေွှး ကို သွေ့ခြောက်အောင် အခြောက် ခံပြီး လ္ဘက်ခြောက် လိုမျိုး ရေနွေးထဲ ခပ်သောက်ပါ။ ဒိဌ ပျောက်ကင်း ပါသည်။ သွေ့ခြောက် = နေ ပူ တိုက်ရိုက် မခံဘဲ နေရိပ် ထဲမှာ ဖြန့်လှမ်း အခြောက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆေးမြီးတိုများ Credit :မြန်မာ့ဆေးစွမ်းကောင်း တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မကုန္ဘဲ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေပ်ာက္နည္း ေက်ာက္ ကပ္ … Read more
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ခဏခဏ ပြန်သုံးနေတဲ့ ပြန်ကြော်ဆီတွေကို သန့်စင်တဲ့နည်း
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ခဏခဏ ပြန်သုံးနေတဲ့ ပြန်ကြော်ဆီတွေကို သန့်စင်တဲ့နည်း ကျနော် တို ့နိုင်ငံမှာ လဘက်ရည်ဆိုင် (၁၀)ဆိုင် ဝင်ကြည့် (၉) ဆိုင် လောက်က အီကြာကွေး/ စမူဆာ/ အကြော်စုံ ကြော်တဲ့ ဆီတွေက အပူလွန်ပြီး ဆီရဲ့အရည်အသွေး ကုန်ဆုံးနေတဲ့ အပြင် သေးငယ်တဲ့ အမှုန်လေးတွေ က မီးလောင်ကျွမ်းပြီး ဆီတွေက မဲတူးနေတာပဲ။ ဆီထဲ မှာပါနေတဲ့ အမှုန် လေးတွေက ကင်ဆာနဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ပြောတဲ့ “ဆီတစ်ပိဿ ကို ကော်မှုန့် နို ့ဆီဗူး တစ်ဗူး နှုံး” နဲ ့”ကော်မှုန့်နဲ့ရေ … Read more
ကျော်ချက်ပြီးသားဆီကို ပြန်သုံးတာဟာ နှလုံးရောဂါ လေဖြတ်ရောဂါ နှင့် ကင်ဆာတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကျော်ချက်ပြီးသားဆီကို ပြန်သုံးတာဟာ နှလုံးရောဂါ လေဖြတ်ရောဂါ နှင့် ကင်ဆာတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ကျော်ချက်ပြီးသား ဆီကို ပြန်သုံးတာဟာ နှလုံးရောဂါ လေဖြတ်ရောဂါ နှင့် ကင်ဆာတို့ကို ဖြစ်စေနိုင် တစ်ခုခုကြော်ပြီးတဲ့ဆီကို ပြန်ပြီး အပူပေးလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီဆီကအဆိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွား ပါတယ်။ကျွန်မတို့ အိမ်ရှင်မတွေဟာ မဟုတ်တာလေးကို သိပ်ကန့်တွက်ကြပါတယ်။ ကြက်ဥကြော် လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုနေတဲ့ ဆီတွေကို အရွက်တစ်ခုခုကြော်ဖို့အတွက် ပြန်ပြီးအသုံးပြု တတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်သုံးနေတဲ့ဆီဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ထုတ်တဲ့ ဆီဖြစ်နေရင် ပိုလို့ တောင်ရှောင်ကျဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတို့ရဲ့ လက်ထဲမှာ မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေး ပုံအပ်ခံထားရတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်။ တစ်ခုခုကြော်ပြီးလို့ ပိုတဲ့ဆီကို ပြန်သုံးတာဟာ နှလုံးရောဂါ လေဖြတ်ရောဂါ နဲ့ ကင်ဆာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ ပဲဆီ ပြောင်းဆီ နေကြာဆီအပြင် တခြား … Read more